Kulanka Qorsheynta Xasilinta Soomaaliya oo maanta ka furmay Djibouti. – Radio Daljir
Juunyo 14, 2012 1:14 g 0
Djibouti, Jun 14 – Waxaa maanta magaalada Djibouti, Hotelka Kempinsk ka furmay kulanka Qorsheynta Xasilinta Soomaaliya oohalkaas ka socon doono muddo 4-cisho ah. Kulankan waxaa soo qabanqaabisay Dowladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaana Guddiga u qaabilsan Xasilinta iyo dib u heshiisiinta (National Steering Comittee). Barnaamijka ayaa waxaa fududeeyey Hay’adda mucaawinadda Mareykanka ee USAID.
“Muhimada uu noo leeyahay waxaa ka mid ah in Gobolka Hiiraan uu ka mid noqday meelaha mashaariicdan hormarineed ee TIS ee xiligan laga fulin doono, Degmooyinkan Baladweyne, Matabaan iyo Maxaas waxay ka faaiideysan doonaan Barnaamijkan USIAD ee 5-ta sano ee Soo socta, waana soo bandhigeynaa baahiyeheena dhanka caafimaad, waxbarasho, iyo biyo iyo kuwa kale.? Degmooyinkan waa goobo 20 sano aan adeegyadaas Dowlad ka fulisa helin waana noo farxad” sidaas waxaa yiri Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xassan Afrax.
Maxaad ka taqaan magaalada Jabbuuti ee xarunta jamhuuriyadda Jabbuuti? (Daawo siwirada)
Warsaxaafadeed: R/Wasaare Gaas oo dalka dib ugu soo laabtay.